Home Wararka Madaxda DG oo ka gaabsaday inay ka horyimaadaan go’aanka Farmaajo
Madaxda DG oo ka gaabsaday inay ka horyimaadaan go’aanka Farmaajo
Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Puntland, Jubaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo shir ku yeeshay aalada la iska arko ayaa kawada-hadlay xaalada dalku marayo. Waxa ay ka doodeen doorka ay ka qaadan karaan xal u helida xaalada Siyaasadeed ee kacsan.
Qoraalka ka soo baxay dowlad goboleedyada ayaa lagu sheegay in ay ku baaqayaan in labada dhinac ay si wadahdal ah ku xaliyaan khilaafka. Hadalka ka soo yeeray Dowlad Goboleedyada ayaa dhabar jab ku ah Ra’iisal Waasare Rooble oo doonayay in madaxda dowlad goboleedyada si buuxda u taageeraan mowqifkiisa siyaasadeed.
Sidoo kale waxa ay shaaciyeen in ay todobaadka dambe shir ku yeelan doonaan magaalada Garoowe ee xarunta Puntland. Shirka Garoowe oo dhici doona 21 ilaa 23 bishaan September ayaa la sheegay in looga hadli doono dardargelinta qabsoomidda doorashooyinka iyo guud ahaan xaaladda Soomaaliya.
“Madaxweynayaasha Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka waxay shir isugu imaanayaan magaalada Garoowe 21 – 23 September 2021 si ay uga arrinsadaan dardargelinta qabsoomidda doorashooyinka iyo guud ahaan xaaladda Dalka” ayaa lagu yiri war-saxaafeed wadajir ah oo ka soo baxay dowlad goboleedyada.
Hadalka ka soo yeeray dowlad goboleedyada ayaa waxa uu niyad jab ku ridi dona kooxaha taageersan Ra’iisal Wasaare Rooble.